Thomas Tuchel: 'Tammy Abraham waa inuu u dagaallamaa booskiisa Chelsea'
Home Horyaalka Ingiriiska Thomas Tuchel: ‘Tammy Abraham waa inuu u dagaallamaa booskiisa Chelsea’
Thomas Tuchel: ‘Tammy Abraham waa inuu u dagaallamaa booskiisa Chelsea’
Thomas Tuchel ayaa u sheegay Tammy Abraham inuu u dagaallamo booskiisa Chelsea ka dib markii uu ka tagay weeraryahanka reer England safka axada ee wajahay Manchester United .
Tababaraha cusub ee Tuchel ayaa shaaca ka qaaday in Abraham laga reebay shaxda kooxda Chelsea sababo la xiriira xulkiisa, iyadoo Blues ay barbaro goolal la’aan ah la gashay Red Devils
Weeraryahanka Olivier Giroud ayaa lagu aaminay inuu hogaamiyay safka kulanka United, iyadoo Tuchel uu ugu yeeray Abraham inuu aqbalo xaalada isla markaana uu ka shaqeeyo sidii uu ugu qasbi lahaa inuu dib ugu soo laabto Kubadiisa.
“Xaaladani waa mid gebi ahaanba dabiici ah, waa inuu si sax ah u sameeyaa waxa uu sameeyo; si fiican u tababar, niyad wanaagsan lahow oo aqbal inuu weeraryahan u yahay Chelsea sidaa darteed tani waa tartankii ugu sarreeyay Yurub,” ayuu yiri Tuchel.
“Marka aad u ciyaareyso Chelsea, waa go’aan adag oo aan ku qasbanahay inaan qaato waana ku faraxsanahay markaan qaadanayo sababtoo ah waxay la micno tahay qof walba inuu saaran yahay diyaaradda.
Qandaraaska Abraham ee Chelsea wuxuu soconayaa illaa 2023, ka dib markii 23 jirkaan uu sanad dheeri ah ku kordhiyay qandaraaskiisii ​​haatan ee dhamaadka xilli ciyaareedkii hore.
Waqtigaas Abraham ayaa la filayay inuu dhameystiro heshiis cusub oo waqti dheer ah oo Chelsea ah isagoo aan wax arinta ah ka hadlin.
Previous articleSidee loo kala hogaminayaa horyaalka Germalka gool dhalinta caawinta iyo dhibcaha.
Next articleBayern Munich oo 39m ku dalbaneysa Kalidou Koulibaly